Izindaba - Ukusetshenziswa Kwe-PE Pipe
1. PE izimayini ipayipi
Phakathi kwawo wonke amaplastikhi obunjiniyela, i-HDPE inokumelana okugqoke kakhulu futhi iyona ebonakala kakhulu. Lapho isisindo samangqamuzana siphakama, kulapho impahla imelana nokugqokwa, idlula ngisho nezinto eziningi zensimbi (njenge-carbon steel, insimbi engagqwali, ithusi, njll.). Ngaphansi kwezimo zokugqwala okuqinile nokugqoka okuphezulu, impilo yesevisi iphindwe ka-4-6 kunepayipi lensimbi nezikhathi eziyi-9 ze-polyethylene ejwayelekile; Futhi ukusebenza kahle kokuhambisa kuthuthukiswa ngama-20%. Izinsimbi ezinciphisa ilangabi nezokulwa zilungile futhi zihlangabezana nezidingo ezijwayelekile. Impilo yesevisi eyehlelayo ingaphezu kweminyaka engama-20, enezinzuzo ezimangazayo zezomnotho, ukumelana nomthelela, ukumelana nokwembatha nokumelana okuphindwe kabili.
2. PE indle ipayipi
Ipayipi le-PE lokulahlwa kwendle libizwa nangokuthi ipayipi eliphakeme le-polyethylene pipe, okusho ukuthi i-HDPE ngesiNgisi. Lolu hlobo lwamapayipi luvame ukusetshenziselwa ukukhetha kuqala kubunjiniyela bakamasipala, olusetshenziswa kakhulu embonini yokwelashwa kwendle. Ngenxa yokuqina kwayo kokugqoka, ukumelana ne-asidi, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nomfutho ophakeme nezinye izici, kancane kancane kwafaka esikhundleni sesikhundla samapayipi wendabuko njengamapayipi wensimbi namapayipi kasimende emakethe, ikakhulukazi ngoba leli payipi lilula ngesisindo futhi kulula ukufaka nokuhambisa, futhi kungukukhetha kokuqala kwezinto ezintsha. Abasebenzisi kufanele banake ngokukhethekile amaphuzu alandelayo lapho bekhetha amapayipi enziwe ngale nto: 1. Naka ngokukhethekile ukukhethwa kwezinto zokusetshenziswa zamapayipi epulasitiki. Kunezinkulungwane zamamaki ezinto zokusetshenziswa ze-polyethylene, futhi kukhona izinto zokusetshenziswa ezingaphansi kwezinkulungwane ezimbalwa zama-yuan ngethani emakethe. Imikhiqizo ekhiqizwa yile nto eluhlaza ayikwazi ukwakhiwa, ngaphandle kwalokho, ukulahleka kabusha kuzokuba kukhulu. 2. Ukukhethwa kwabakhiqizi bamapayipi kuzoba ngaphansi kwabakhiqizi abahlelekile nabaqeqeshiwe. 3. Lapho ukhetha ukuthenga amapayipi e-PE, hlola abenzi bawo khona lapho ukuze babone ukuthi banamandla wokukhiqiza yini.
3. Ipayipi lokuhambisa amanzi le-PE
Amapayipi e-PE wokuphakelwa kwamanzi ayimikhiqizo efakwa esikhundleni samapayipi endabuko ensimbi namapayipi amanzi okuphuza e-PVC.
Ipayipi lokuhambisa amanzi kufanele lithwale ingcindezi ethile, futhi i-PE resin enesisindo esiphakeme samangqamuzana nezakhiwo ezinhle zomshini, njenge-HDPE resin, kuvame ukukhethwa. I-resin ye-LDPE inamandla aphansi okuqina, ukumelana nengcindezi engekuhle, ukuqina okungalungile, ukuqina kobukhulu obuphansi ngesikhathi sokubumba nokuxhuma okunzima, ngakho-ke ayifanelekile njengombhobho wepayipi lokuhambisa amanzi. Kodwa-ke, ngenxa yenkomba yayo ephezulu yenhlanzeko, i-PE, ikakhulukazi i-HDPE resin, isiphenduke into ejwayelekile yokukhiqiza amapayipi amanzi okuphuza. I-HDPE resin ine-viscosity ephansi yokuncibilika, ukufudumala okuhle nokucubungula okulula, ngakho-ke inkomba yayo yokuncibilika inezinhlobo ezahlukahlukene zokukhetha, imvamisa i-MI iphakathi kuka-0.3-3g / 10min.